Nabadoon lagu dilay Baladweyne – STAR FM SOMALIA
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa dil xalay maqribnimadii magaalada Baldweyne ee gobolka hiiraan ee dalka Somalia loogu geystay nin nabadoon ahaa.
Koox hubeysan oo aan heybtooda la aqoonin ayaa nabadoonka oo lagu magacaabi jiray Xasan Aadan Deeqow (Xasan Ood) ku dishay weerar ka dhacay xaafada Buundoweyn ee magaalada Beledweyne.
Falkaan ayaa dhacay xili nabadoonka oo ka mid ahaa wax garadka ugu caansan deegaanka uu ku sii jeeday hoygiisa.
Dad Goobjoogayaal ah ayaa waxay Warbaahinta u sheegeen in Nabadoon lagu dhuftay dhowr xabadood, uuna dhiig bax kadib isla goobta ku geeriyooday.
Kooxihii falka geystay ayaa lagu soo waramayaa in ay durba halkaas isaga baxsadeen, in kastoo ay socdaan howlgallo lagu ugaarsanayo.
Waa dilkii labaad ee nabadoon loo geysto oo magaalada Baladweyne ka dhaca inti lagu guda jiray bishan Ramadan, waxaana 2 maalmood ka hor
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya Khasaaraha ka dhashay Ismiidaaminta Muqdisho ka dhacday